SABABTA? - www.yomelijah.com
Menu ugu weyn (Ingiriis)
Kiswahili Afrikaans አማርኛ Hausa Igbo Malagasy isiXhosa Yoruba Zulu
Guji xiriirinta si aad u aragto soo -bandhigga fiidiyowga ee maqaalka twitter -ka, haddii aad leedahay koonto
Muxuu ilaahay u ogolaaday silica iyo xumaanta ilaa maanta?
"Rabbiyow, ilaa goormaan kuu qayshadaa, oo adna aadan i maqlayn? Dulmi baan kaaga qayshadaa, oo namana aad badbaadisid. Bal maxaad xumaan ii tustaa oo aad qallooc iigu jeedisaa? Waayo, waxaa hortayda yaal halligaad iyo dulmi, oo waxaa kor u kaca dirir iyo dagaal. Sidaas daraaddeed sharcigii waa dabcay oo caddaaladduna hore uma socoto, waayo, kii sharrow ah ayaa hareereeya kii xaq ah, oo sidaas daraaddeed garsooridda waa la qalloociyaa"
"Markaasaan mar kale soo fiirsaday waxyaalaha dulmiga ah ee qorraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan, oo waxaan fiiriyey kuwa la dulmay ilmadoodii, oo mid u qalbi qabowjiyana ma ay lahayn. Kuwii iyaga dulmayay dhankooda xoog baa jiray, laakiinse iyagu qalbiqabowjiye ma ay lahayn. (...) Waxaa jira nin xaq ah oo xaqnimadiisa ku halligma iyo nin shar ah oo sharnimadiisa ku cimri dheeraada; labadaba wakhtigii aan waxtarka lahayn ee aan noolaa ayaan arkay. (...) Waxaas oo dhan ayaan arkay, oo qalbigaygana waan u soo jeediyey shuqul kasta oo qorraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan. Waxaa jira wakhti nin mid kale u taliyo oo uu wax yeelo. (...) Waxaa jira wax aan waxba tarayn oo dhulka lagu sameeyo, waana inay jiraan kuwa xaqa ah oo ay wax ku dhacaan sida shuqulka kuwa sharka ah, oo haddana ay jiraan kuwa sharka ah oo ay wax ku dhacaan sida shuqulka kuwa xaqa ah. Oo waxaan idhi, Taasuna waa wax aan waxba tarayn. (...) Waxaan arkay addoommo fardo fuushan, iyo amiirro sida addoommo oo kale lugaynaya"
(Wacdiyahii 4:1; 7:15; 8:9,14; 10:7)
"Uunkii waxaa la hoos geliyey wax aan waxtar lahayn, ikhtiyaarkiisna uma uu hoos gelin, laakiin waa kii hoos geliyey aawadiis"
"Midna yuu odhanin kolkii la jirrabo, Xagga Ilaah baa layga jirrabay. Waayo, Ilaah laguma jirrabo shar, isaguna midna ma jirrabo"
Dembiga dhabta ah ee xaaladdan waa Shaydaan Ibliis, oo lagu sheegay Kitaabka Qudduuska ah inuu yahay eedeeye (Muujintii 12: 9). Ciise Masiix, Wiilka Ilaah, wuxuu sheegay in Ibliisku beenaale yahay oo uu dilayo aadanaha (Yooxanaa 8:44). Waxaa jira laba eedeyn ugu waaweyn:
1 - Su’aasha ah madaxbanaanida ilaahay.
2 - Su’aasha ah hufnaanta aadanaha.
Markay jiraan eedeymo culus, waxay qaadataa waqti dheer xukunka ugu dambeeya. Wax sii sheegidda Daanyeel cutubka 7, waxay soo bandhigeysaa xaaladda maxkamad dhexdeeda, oo ay ku lug leedahay madax-bannaanida Ilaah, halkaas oo xukun ka jiro: "Oo waxaa hortiisa ka soo dareeray oo ka soo baxay durdur dab ah; oo waxaa u adeegayay kumaan kun iyo kumaan kun, hortiisana waxaa taagnaa toban kun oo min toban kun ah; oo xukunkiina waa la dhigay, kitaabbadiina waa la furay. (...) Laakiinse xukunku wuu ahaan doonaa, oo waxaa laga qaadi doonaa dowladnimadiisa, si loo dhammeeyo oo loo baabbi'iyo ilaa ugudambaysta" (Daanyeel 7:10,26). Sida ku qoran qoraalkan, xukunkii dhulka waxaa laga qaaday Shaydaanka iyo binu-aadmiga. Sawirka maxkamadda waxaa lagu soo bandhigay Ishacyaah cutubka 43aad, halkaas oo ay ku qoran tahay in kuwa adeeca Ilaah, ay yihiin "markhaatiyaashiisa": "Yehowah wuxuu leeyahay, Idinka iyo addoonkaygii aan doortayba markhaatiyaashaydii baad tihiin inaad ogaataan oo aad i rumaysataan, oo aad garataan inaan anigu isagii ahay. Aniga hortay Ilaah lama samayn, dabadayna innaba ma jiri doono. Aniga, aniga qudhayda ayaa Yehowah ah, oo aniga mooyaane Badbaadiye kale ma jiro" (Ishacyaah 43:10,11). Ciise Masiix sidoo kale waxaa loogu yeeraa "markhaatiga aaminka ah" ee Ilaah (Muujintii 1:5).
Marka laga hadlayo labadan eedeyn culus, Yehowah Ilaahay wuxuu u oggolaaday Shaydaanka iyo bini-aadamka waqti, in ka badan 6,000 sano, inay soo bandhigaan caddayntooda, oo ah inay dhulka xukumi karaan madax-bannaanida Ilaah. Waxaan ku jirnaa dhamaadka waayo-aragnimadan halka beenta sheydaanka lagu muujiyo xaalada musiibada ah ee bini-aadamku isku arko, qarka u saaran inuu burburo guud (Matayos 24:22). Xukunka iyo baabi'intu waxay ka dhici doonaan fitnada weyn (Matayos 24:21; 25:31-46). Haddaba aynu si gaar ah uga hadalno labada eedaymo ee Ibliiska, ee Bilowgii cutubyada 2 iyo 3, iyo buugga Ayuub cutubyada 1 iyo 2.
1 - Su’aasha ah gobanimada ilaahay
Bilowgii cutubka 2, wuxuu ina ogeysiinayaa inuu Eebbe abuuray nin uuna dhigay "beer" Ceeden. Aadam wuxuu kujiray xaalado wanaagsan wuxuuna ku naalooday xorriyad weyn (Yooxanaa 8:32). Si kastaba ha noqotee, Ilaah wuxuu xaddiday xorriyaddan: geed: "Yehowah Ilaah ahuna ninkii wuu kaxeeyey oo wuxuu geeyey beer Ceeden inuu falo oo dhawro. Yehowah Ilaah ahuna wuxuu ninkii ku amray isagoo leh, Geed kasta oo beerta ku yaal wax baad ka cuni kartaa: laakiin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waa inaanad waxba ka cunin: waayo, maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa" (Bilowgii 2:15-17). "Geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta" wuxuu si fudud u ahaa matalaadda la taaban karo ee fikradda la taaban karo ee wanaagga iyo xumaanta. Hadda geedkan dhabta ah, xadka la taaban karo, "aqoon (wanaag) xumaan iyo samaan leh". Hadda ka dib, Ilaah wuxuu xad u dhexeeyey "wanaagga" iyo u hoggaansamiddiisa iyo "xumaanta", caasinimo.
Way iska cadahay in amarkan ilaahay uusan dhib ahayn (Isbarbar dhig Matayos 11: 28-30 "Waayo, harqoodkaygu waa dhib yar yahay, oo rarkayguna waa fudud yahay," iyo 1 Yooxanaa 5: 3 "amarradiisuna ma cusla" (kuwa Ilaah)). Dhinaca, qaar baa yidhi "midhaha la mamnuucay" waxay u taagan tahay warbixinnada galmo: waa khalad, maxaa yeelay markii Eebbe amarkan bixiyay, Xaawo ma jirin. Ilaah uma diidin inuu xannibo wixii Aadan garan waayey (Isbarbar dhig taariikhda dhacdooyinka Bilowgii 2:15-17 (amarka Ilaah) iyo 2:18-25 (abuurkii Xaawa)).
"Haddaba abeesadu way ugu khiyaano badnayd bahal kasta ee duurka jooga oo Rabbiga Ilaah ahu sameeyey. Oo waxay naagtii ku tidhi, Ilaah miyuu idinku yidhi, Waa inaydnaan waxba ka cunin geed kasta oo beerta ku yaal? Naagtiina waxay abeesadii ku tidhi, Midhaha geedaha beerta waannu cuni karnaa; laakiinse midhaha geedka beerta dhexdeeda ku yaal, Ilaah wuxuu nagu yidhi, Waa inaydnaan waxba ka cunin, ama aydnaan taaban, yeydnan dhimanine. Abeesadiina waxay naagtii ku tidhi, Ma dhiman doontaan; waayo, Ilaah wuxuu og yahay in maalinta aad cuntaan ay indhihiinnu furmi doonaan, oo aad noqon doontaan sida Ilaah oo kale, idinkoo kala garanaya wanaagga iyo xumaanta. Oo markii naagtii aragtay in geedkii cunto ku wanaagsan yahay, oo indhaha u roon yahay, oo uu yahay geed caqli lagu yeesho, ayay midho ka qaadatay, oo cuntay; ninkeedii la joogayna wax bay ka siisay, oo isagiina wuu cunay" (Bilowgii 3:1-6).
Muxuu Shaydaan ula hadlay Xaawa intii uu Aadan ka hadli lahaa? Waxaa qoran: "Aadanna lama khiyaanayn, laakiin naagtii baa inta la khiyaaneeyey waxay noqotay mid xadgudubtay" (1 Timoteyos 2:14). Maxaa Xaawo Loo Khiyaanay? Dhallinyarnimadiisa darteed, halka Aadan ugu yaraan afartan sano weynaa. Sidaa darteed Shaydaanku wuxuu ka faa'iideystay khibrad la'aanta Xaawo. Si kastaba ha noqotee, Aadan wuu ogaa wuxuu sameynayo, wuxuu qaatay go'aan ah inuu ku dembaabo si ula kac ah. Eedeyntan Ibliis ee ugu horraysay, waxay ahayd weerar lagu qaaday madax-bannaanida Ilaah (Muujintii 4:11).
Xukunka iyo ballanqaadka Eebbe
Waxyar ka hor dhammaadka maalintaas, intaan qorraxdu dhicin, Ilaah baa xukumay (Bilowgii 3: 8-19). Xukunka ka hor, Yehowah Ilaahay su'aal buu weyddiiyey. Waa tan jawaabtu: "Ninkiina wuxuu yidhi, Naagtii aad i siisay inay ila joogto ayaa geedkii wax iga siisay, oo anna waan cunay. Oo Rabbiga Ilaah ahu wuxuu naagtii ku yidhi, Waa maxay waxan aad samaysay? Naagtiina waxay tidhi, Abeesadaa i khiyaanaysay oo anna waan cunay" (Bilowgii 3:12,13). Aadan iyo Xaawo ma aysan qiran dambigooda, waxay isku dayeen inay qiil u yeeshaan naftooda. Bilowgii 3:14-19, waxaynu ka akhrisan karnaa xukunka Ilaah iyo balan qaad ah oo fulintiisa ujeedadiisa: "oo colaad baan idin dhex dhigi doonaa adiga iyo naagta, iyo farcankaaga iyo farcankeeda; oo madaxaaguu burburin doonaa, adiguna cedhibtiisaad burburin doontaa" (Bilowgii 3:15). Ballanqaadkan, ayuu Rabbiga Ilaah ku sheegay in ujeeddadiisu rumoobi doonto, iyo in Shayddaanka Ibliiska la baabi'in doono. Laga bilaabo wakhtigaas wixii ka dambeeya, dembigu wuxuu soo galay dunida, iyo sidoo kale cawaaqibkeeda ugu weyn, dhimashada: "Haddaba sida dembigu nin keliya dunida ugu soo galay, dhimashaduna dembiga ugu timid, sidaasaa dhimashadiina u gaadhay dadka oo dhan, waayo, waa la wada dembaabay" (Rooma 5:12).
Markaasaa Yehowah wuxuu Shayddaan ku yidhi, War xaggee baad ka timid? Oo Shayddaan wuxuu Yehowah ugu jawaabay, Waxaan ka imid dhulkii aan maray, oo aan hor iyo dibba ugu dhex socday. Markaasaa Rabbigu wuxuu Shayddaan ku yidhi, Addoonkayga Ayuub ma ka fikirtay? Maxaa yeelay, isaga oo kale dhulka ma joogo, waayo, isagu waa nin qumman oo toosan, oo ah mid Ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada. Markaasaa Shayddaan Rabbiga u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, Bal Ayuub ma waxtarla'aan buu Ilaah uga cabsadaa? Sow deyr kuma aad wareejin isaga, iyo reerkiisa, iyo waxa uu haysto oo dhanba? Shuqulkii gacmihiisaad barakaysay, oo xoolihiisiina dhulkay aad ugu bateen. Laakiinse haddaba bal gacantaada soo fidi, oo wuxuu haysto oo dhan taabo, oo isna sida runta ah, hortaada wax xun buu kaaga sheegi doonaa. Markaaasaa Yehowah wuxuu Shayddaan ku yidhi, Bal eeg, wuxuu haysto oo dhammu gacantaaday ku jiraan, laakiinse isaga nafsaddiisa waa inaadan far saarin. Markaasaa Shayddaan Yehowah hortiisii ka tegey.
2 - Su’aasha ah hufnaanta aadanaha
Sheydaanku wuxuu yiri cilad ayaa ku jirta dabeecada aadanaha. Tani waa dacwadda Ibliiska ee ka dhanka ah daacadnimada Ayuub: "Markaasaa Yehowah wuxuu Shayddaan ku yidhi, War xaggee baad ka timid? Oo Shayddaan wuxuu Yehowah ugu jawaabay, Waxaan ka imid dhulkii aan maray, oo aan hor iyo dibba ugu dhex socday. Markaasaa Rabbigu wuxuu Shayddaan ku yidhi, Addoonkayga Ayuub ma ka fikirtay? Maxaa yeelay, isaga oo kale dhulka ma joogo, waayo, isagu waa nin qumman oo toosan, oo ah mid Ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada. Markaasaa Shayddaan Rabbiga u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, Bal Ayuub ma waxtarla'aan buu Ilaah uga cabsadaa? Sow deyr kuma aad wareejin isaga, iyo reerkiisa, iyo waxa uu haysto oo dhanba? Shuqulkii gacmihiisaad barakaysay, oo xoolihiisiina dhulkay aad ugu bateen. Laakiinse haddaba bal gacantaada soo fidi, oo wuxuu haysto oo dhan taabo, oo isna sida runta ah, hortaada wax xun buu kaaga sheegi doonaa. Markaaasaa Yehowah wuxuu Shayddaan ku yidhi, Bal eeg, wuxuu haysto oo dhammu gacantaaday ku jiraan, laakiinse isaga nafsaddiisa waa inaadan far saarin. Markaasaa Shayddaan Yehowah hortiisii ka tegey. (…) Markaasaa Rabbigu wuxuu Shayddaan ku yidhi, War xaggee baad ka timid? Oo Shayddaan wuxuu Rabbiga ugu jawaabay, Waxaan ka imid dhulkii aan maray, oo aan hor iyo dibba ugu dhex socday. Markaasaa Rabbigu wuxuu Shayddaan ku yidhi, Addoonkayga Ayuub ma ka fikirtay? Maxaa yeelay, isaga oo kale dhulka ma joogo, waayo, isagu waa nin qumman oo toosan, oo ah mid Ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada. Oo weliba isagu daacadnimadiisii wuu sii haystaa, in kastoo aad igu dirtay, si aan isaga sababla'aan ugu halligo. Markaasaa Shayddaan wuxuu Rabbiga ugu jawaabay, Haragba harag baa loo baxshaa, oo nin wuxuu haysto oo dhan ayuu naftiisa u baxshaa. Laakiinse bal haatan gacantaada soo fidi, oo lafihiisa iyo jiidhkiisa taabo, oo isna markaasuu hortaada wax xun kaaga sheegi doonaa. Markaasaa Rabbigu wuxuu Shayddaan ku yidhi, Bal eeg, gacantaaduu ku jiraa, waxaadse u daysaa naftiisa" (Ayuub 1:7-12; 2:2-6).
Fashilka aadanaha, sida uu sheegayo Shaydaanka Ibliis, waa inuu u adeego Eebbe, jacayl aan isaga u qabin, laakiin dano gaar ah iyo danaysi. Cadaadis, adoo lumiya hantidiisa iyo cabsida dhimashada, sheegayo Shaydaanka Ibliiska, bani aadamku aamin kuma noqon karo Ilaah. Laakiin Ayuub wuxuu muujiyey inuu Shaydaanku beenaale yahay: Ayuub wuxuu lumiyay hantidiisii ​​oo dhan, wuxuu waayey 10 carruur ah, wuxuuna ku sigtay inuu u dhinto cudur (Ayuub 1 iyo 2). Saddex saaxiib oo been ah ayaa Ayuub si cilmi-nafsi ah u jirdilay, iyagoo dhahaya in dhibaatadiisa oo dhami ay ka timid dembiyada qarsoon, sidaas darteedna Ilaah ugu ciqaabayo dembigiisa iyo sharnimadiisa. Sidaas oo ay tahay Ayuub kama uu tegin daacadnimadiisii, oo wuxuu ku yidhi: "Ilaah ha iga fogeeyo inaan xaq idinka dhigo, Jeeraan dhinto daacadnimadayda iska tuuri maayo" (Ayuub 27:5).
Si kastaba ha noqotee, guuldaradii ugu weyneyd ee sheydaanka ee ku saabsan daacadnimada aadanaha, waxay ahayd guushii Ciise Masiix ee adeecay Ilaah, ilaa geerida: "Oo markuu nin u ekaaday, ayuu is-hoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto, xataa inuu iskutallaabta ku dhinto" (Filiboy 2:8). Ciise Masiix, daacadnimadiisa, wuxuu u soo bandhigay Aabihiis guul ruuxi ah oo aad u qaali ah, waana sababta loogu abaalguday: "Haddaba sidaas daraaddeed Ilaah isaga aad buu u sarraysiiyey, oo wuxuu isaga siiyey magaca magac kasta ka sarreeya; in jilib kastoo ah waxyaalaha samada ku jira iyo waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeyaaba, ay magaca Ciise u wada sujuudaan, iyo in carrab kastaaba qirto in Ciise Masiix yahay Rabbiga in Ilaaha Aabbaha ah lagu ammaano” (Filiboy 2:9-11).
Tusaalaha "wiilka caasiyow", Ciise Masiix wuxuu noo ogolaanayaa inaan sifiican ufahamno habka Aabihiis udhaqmayo, marka maamulka Ilaah su'aal la geliyo (Luukos 15:11-24). Wiilkii wuxuu weydiistay aabihiis dhaxalkiisa iyo inuu ka baxo guriga. Aabuhu wuxuu u oggolaaday wiilkiisa qaangaarka ah inuu qaato go'aankan, laakiin sidoo kale inuu qaado cawaaqibka. Sidoo kale, Aadan wuxuu adeegsaday doorashadiisa xorta ah, laakiin sidoo kale wuxuu la kulmay cawaaqib xumada. Kaas oo noo keenaya su'aasha xigta ee ku saabsan dhibaatada aadanaha.
Rafaadku waa natiijada afar arrimood oo waaweyn
1 - Ibliisku waa kan dhibaatada silica (laakiin had iyo jeer maahan) (Ayuub 1:7-12; 2:1-6). Sida uu sheegayo Ciise Masiix, Shaydaanku waa kan xukuma dunidan: "Imminka weeye markii dunidan la xukumi lahaa, imminka kan madaxda dunida ah dibaddaa lagu tuuri doonaa" (Yooxanaa 12:31; 1 Yooxanaa 5:19). Tani waa sababta aadanuhu guud ahaan ugu faraxsanayn: "Waayo, waxaynu og nahay in uunka oo dhammu wada taahayo oo wada foolanayo ilaa haatan" (Rooma 8:22).
2 - Rafaadku waa natiijada xaaladdeena dembi leh, taas oo inoo horseedaysa gabow, jirro iyo dhimasho: "Haddaba sida dembigu nin keliya dunida ugu soo galay, dhimashaduna dembiga ugu timid, sidaasaa dhimashadiina u gaadhay dadka oo dhan, waayo, waa la wada dembaabay. (...) Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimashada” (Rooma 5:12; 6:23).
3 - Dhibaatadu waxay ka dhalan kartaa go'aamada xun (annaga dhinaceena ama kuwa aadanaha kale): "Waayo, waxa wanaagsan oo aan doonayo inaan falo, ma sameeyo, laakiinse waxa sharka ah oo aanan doonayn inaan falo, ayaan sameeyaa" (Sharciga Kunoqoshadiisa 32:5; Rooma 7:19). Dhibku ma aha natiijada "sharciga karma". Waa tan waxa aan ka akhriyi karno Yooxanaa cutubka 9: "Ciise intuu socday, wuxuu arkay nin indhala'aan ku dhashay. Xertiisu waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen, Macallimow, yaa dembaabay, ma kan baa mise waa waalidkiis, inuu indhala'aan ku dhasho? Ciise ayaa ugu jawaabay, Ninkan iyo waalidkiis midna ma dembaabin, laakiin waa in shuqullada Ilaah lagu muujiyo isaga” (Yooxanaa 9:1-3). "Shuqullada Ilaah", xaaladdiisa, waxay noqon doontaa mucjiso lagu bogsiinayo ninka indhoolaha ah.
4 - Rafaadku wuxuu noqon karaa natiijada "waqtiyo iyo dhacdooyin lama filaan ah", taas oo keeneysa inuu qofku joogo meel qaldan waqti aan munaasib ahayn: "Markaasaan mar kale fiirsaday, oo waxaan qorraxda hoosteeda ku arkay inaan kuwa dheereeyaa mar kasta tartanka ku badin, ama aan kuwa xoogga badanu mar kasta dagaalka adkaan, ama aan kuwa xigmadda lahu mar kasta kibis helin, ama aan kuwa garaadka ahu mar kasta hodan noqon, ama aan saanacyada mar kasta raalli laga ahayn, laakiinse waxaa kulligood hela wakhti iyo nasiib. Waayo, ninna wedkiisa ma yaqaan. Sida kalluun shabag xun lagu qabto, iyo sida shimbirro dabin ku dhaca, saasoo kalaa binu-aadmigana wakhti xun lagu dabaa, markii wedku si kedis ah ugu yimaado" (Wacdiyahii 9:11,12).
Waa kan waxa Ciise Masiix ka yidhi laba dhacdo oo naxdin leh oo sababay dhimasho badan: “Wakhtigaas qudhiisa waxaa joogay qaar wax uga sheegay dadka reer Galili oo Bilaatos dhiiggooda ku daray allabarigooda. Kolkaasaa Ciise u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, Ma waxay idinla tahay in kuwii reer Galili ahaa ay ka dembi badnaayeen kuwii kale oo reer Galili oo dhan waxyaalahaas ay ku silceen aawadood? Waxaan idinku leeyahay, Maya, laakiin haddaanad toobadkeenin, kulligiin sidaas oo kale ayaad u lumi doontaan. Ama siddeed iyo tobankii oo munaaradda Siloo'am ay ku soo dhacday oo ay dishay, ma waxay idinla tahay, inay ka gef badnaayeen dadka Yeruusaalem joogay oo dhan? Waxaan idinku leeyahay, Maya, laakiin haddaydnan toobadkeenin, kulligiin sidaas oo kale ayaad u lumi doontaan" (Luukos 13:1-5). Marna Ciise Masiix muu soo jeedin in dadka dhibbanayaasha shilalka ama masiibooyinka dabiiciga ahi ay ka dembi badnayeen kuwa kale, ama xitaa in Ilaah u sababay dhacdooyinka noocaas ah, inuu ciqaabo dembiilayaasha. Hadday cuduro tahay, ama shilal yihiin ama masiibooyin dabiici ah, ma aha Eebbe kan iyaga sameeya oo kuwa dhibbaneyaasha u ah kama dhicin khaladaad ka badan kuwa kale.
Ilaah wuu baabbi'in doonaa silicaas oo dhan: "Markaasaan maqlay cod weyn oo carshiga ka yeedhaya oo leh, Bal eeg, rugta Ilaah waxay la jirtaa dadka, oo isna wuxuu la degganaan doonaa iyaga, oo iyana waxay ahaan doonaan dadkiisa, oo Ilaah qudhiisuna wuxuu la jiri doonaa iyaga, oo wuxuu ahaan doonaa Ilaahood; oo isna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona, waayo, waxyaalihii hore way dhammaadeen" (Muujintii 21:3,4).
Qaddar iyo doorasho xor ah
"Qaddarka" ma aha wax barasho kitaabiga ah. Annaga "barnaamij" inooma aha inaan wanaagsan ama xun samayno, laakiin sida ku xusan "doorashada xorta ah" waxaan dooranay inaan wanaagsan ama xun samayno (Sharciga Kunoqoshadiisa 30:15). Aragtidaan qaddarku waxay xiriir dhow la leedahay fikradda dad badani ka qabaan awoodda Eebbe u leeyahay inuu mustaqbalka ogaado. Waxaan arki doonnaa sida Eebbe u adeegsado awoodiisa inuu ogaado mustaqbalka. Waxaan ka arki doonaa Kitaabka Qudduuska ah inuu Eebbe u adeegsanayo qaab xulasho iyo ikhtiyaari ama ujeedo gaar ah, iyada oo loo marayo tusaalooyin dhawr ah oo kitaabiga ah.
Ilaah wuxuu adeegsadaa awoodiisa inuu ku ogaado mustaqbalka, si ikhtiyaari ah iyo qaab xulasho leh
Ilaah miyuu ogaa in Aadan uu dembaabayo? Laga soo bilaabo macnaha guud ee Bilowgii 2 iyo 3, maya. Ilaah amar ma bixiyo, isagoo hore u og inaan la adeeci doonin. Tani waxay liddi ku tahay jacaylkiisa iyo amarkan Ilaah ma ahayn mid adag (1 Yooxanaa 4:8; 5:3). Halkan waxaa ah laba tusaale oo kitaabiga ah oo muujinaya in Eebbe u adeegsado awoodiisa inuu ku ogaado mustaqbalka qaab xulasho iyo ikhtiyaari ah. Laakiin sidoo kale, inuu marwalba u adeegsado awooddan ujeedo gaar ah.
Tusaale u soo qaad Ibraahim. Bilowgii 22:1-14, Ilaah wuxuu ka codsaday Ibraahim inuu allabaryo wiilkiisa Isxaaq. Ilaah miyuu hore u ogaa in Ibraahim adeeci doono? Laga soo bilaabo macnaha guud ee Bilowgii 22, maya. Ugu dambayn, Ilaah wuxuu u sheegay Ibraahim inuusan samayn: "Markaasay ku tidhi, Gacantaada ha saarin wiilka, waxbana ha ku samaynin: waayo, hadda waan garanayaa inaad Ilaah ka cabsatid, maxaa yeelay, igama aadan lexejeclaysan wiilkaaga, kaas oo ahaa wiilkaaga keligiis ah” (Bilowgii 22:12). Waxaa loo qoray "hadda runti waan ogahay inaad ilaahay ka baqayso". Ereyga "hadda" wuxuu muujinayaa in Ilaah uusan ogeyn inuu Ibraahim adeeci doono codsigan ilaa dhamaadka.
Tusaalaha labaad wuxuu ku saabsan yahay burburintii Sodom iyo Gomora. Xaqiiqda ah in Eebbe u soo diro laba malaa'ig si ay u arkaan xaalad xun waxay mar kale muujineysaa in marka hore uusan lahayn dhammaan caddaymaha uu go'aan ku gaadhayo, kiiskanna wuxuu adeegsaday awoodiisa uu ku ogaanayo isaga oo adeegsanaya laba malaa'igood (Bilowgii 18:20,21).
Haddii aan akhrino buugaagta kitaabiga ah ee kala geddisan, waxaan ogaan doonnaa in Ilaah weli u adeegsanayo awoodiisa uu ku ogaanayo mustaqbalka, ujeeddo gaar ah. Tusaale ahaan, markay Rebecca uur leedahay mataano, dhibaatadu waxay ahayd in la ogaado, labada ilmood kee baa awoowe u noqon doona umadii ilaahay doortay (Bilowgii 25: 21-26). Yehowah wuxuu eegay hiddo-wadaha Ceesaw iyo Yacquub (xitaa haddii aysan ahayn hiddo-wadaha si buuxda u xakameynaya mustaqbalka), ka dibna Eebbe wuxuu arkay nooca ragga ay noqonayaan: "Indhahaagu way i arkeen markaan uurjiifka ahaa, Oo xubnahaygu kitaabkaagay ku wada qornaayeen, Kuwaas oo maalin ka maalin la qabanqaabiyey Intaan midkoodna jirin ka hor" (Sabuurradii 139:16). Iyada oo lagu saleynayo aqoontaan, Ilaah wuxuu doortay (Rooma 9:10-13; Falimaha Rasuullada 1:24-26 "Adigu, Yehowah, adigoo garanaya qalbiga dadka oo dhan").
Yehowah miyuu ina ilaaliyaa?
Kahor intaanan fahmin fikirka ilaahay ee mawduuca ilaalinteena shaqsiyadeed, waxaa muhiim ah inaad tixgaliso sadex qodob oo muhiim ah oo kitaabiga ah (1 Korintos 2:16):
1 - Ciise Masiix wuxuu muujiyey in nolosha hada jirta, ee ku dhamaata dhimashada, ay leedahay qiimo ku meel gaadh ah dadka oo dhan (Yooxanaa 11:11 (Geeridii Laasaros waxaa lagu sifeeyay inay tahay "hurdo"). Intaa waxaa sii dheer, Ciise Masiix wuxuu muujiyay in waxa muhiimka ahi ay yihiin rajada nolosha weligeed ah (Matayos 10:39). Rasuul Bawlos wuxuu tusay in "nolosha runta ah" ay udub dhexaad u tahay rajada nolosha weligeed ah (1 Timoteyos 6:19).
Markaynu akhrino kitaabka Falimaha Rasuullada, waxaynu ogaanaynaa in mararka qaarkood Ilaah uusan addoonkiisa ka ilaalinaynin dhimashada, marka laga hadlayo Yacquub iyo Istefanos (Falimaha Rasuullada 7:54-60; 12:2). Xaaladaha kale, Eebbe wuxuu go’aansaday inuu ilaaliyo addoonkiisa. Tusaale ahaan, dhimashadii rasuul Yacquub kadib, Ilaah wuxuu go'aansaday inuu ka ilaaliyo rasuul Butros geeri isku mid ah (Falimaha Rasuullada 12:6-11). Guud ahaan marka laga hadlayo, macnaha guud ee kitaabiga ah, ilaalinta addoonka Ilaah wuxuu badiyaa ku xiran yahay ujeeddadiisa. Tusaale ahaan, ilaalinta rasuul Bawlos wuxuu lahaa ujeedo sare: wuxuu ahaa inuu wacdiyo boqorada (Falimaha Rasuullada 27:23,24; 9:15,16).
2 - Waa inaan u dhignaa su'aashan ilaalinta Ilaah, macnaha guud ee labada caqabadood ee Shayddaanka iyo gaar ahaan ereyada ku saabsan Ayuub: "Sow deyr kuma aad wareejin isaga, iyo reerkiisa, iyo waxa uu haysto oo dhanba? Shuqulkii gacmihiisaad barakaysay, oo xoolihiisiina dhulkay aad ugu bateen" (Ayuub 1:10). Si jawaabo su'aasha ku saabsan daacadnimada, Ilaah wuxuu go'aansaday inuu ka saaro Ilaalinta Ayuub, laakiin sidoo kale aadanaha oo dhan. Wax yar ka hor intuusan dhiman, Ciise Masiix, isagoo daliishanaya Sabuurada 22:1, wuxuu tusay inuu ilaahay ka qaaday ilaalintiisii ​​oo dhan, taasoo keentay dhimashadiisa allabari ahaan (Yooxanaa 3:16; Matayos 27:46). Si kastaba ha noqotee, ku saabsan aadanaha guud ahaan, maqnaanshaha ilaalinta rabbaaniga ah maahan wadar ahaan, maxaa yeelay sida Ilaah uga mamnuucay Ibliis inuu dilo Ayuub, way iska cadahay inay lamid tahay aadanaha oo dhan. (Isbarbar dhig Matthew 24:22).
3 - Waxaan kor ku soo aragnay in silica ay ka dhalan karto "waqtiyo iyo dhacdooyin lama filaan ah" taas oo macnaheedu yahay in dadku ay isku heli karaan waqti khaldan, meel qaldan (Wacdiyahii 9:11,12). Marka, bini-aadamka guud ahaan kama difaaco cawaaqibka doorashada asal ahaan uu sameeyay Aadam. Ninku wuu gaboobaa, wuuna bukoodaa wuuna dhintaa (Rooma 5:12). Wuxuu noqon karaa dhibbane shilal ama masiibooyin dabiici ah (Rooma 8: 20; kitaabka Wacdiyah waxaa ku jira sharaxaad aad u faahfaahsan oo ku saabsan macno la’aanta nolosha hadda jirta taas oo si lama huraan ah u horseedi doonta dhimasho: "Wacdiyuhu wuxuu leeyahay, Waa wax aan waxba tarayn, waa wax aan waxba tarayn, wax waluba waa wax aan waxba tarayn" (Wacdiyahii 1:2)).
Intaas waxaa sii dheer, Ilaah kama difaaco aadanaha natiijada ka soo baxda go'aannadooda xun: "Yaan laydin khiyaanayn; Ilaah laguma majaajiloodo, waayo, nin kastaa wax alla wuxuu beerto ayuu goosan doonaa. Waayo, kii jidhkiisa wax ku beertaa wuxuu jidhka ka goosan doonaa qudhun, laakiin kii Ruuxa wax ku beertaa, wuxuu Ruuxa ka goosan doonaa nolol weligeed ah" (Galatiya 6:7,8). Haddii Ilaah bani'aadamka uga tegey wax aan waxba tarayn muddo dheer, waxay noo ogolaaneysaa inaan fahanno inuu ka noqday ilaalintiisa cawaaqibka xaaladdeenna dembiilenimo. Xaqiiqdii, xaaladan halista ah ee aadanaha oo dhan waxay noqon doontaa mid ku meel gaar ah (Rooma 8:21). Ka dib markii la xaliyo eedaynta Ibliis, bini aadamku wuxuu dib uheli doonaa samafalka ilaalinta Yehowah (Sabuurka 91:10-12).
Tan macnaheedu ma wuxuu yahay in xilligan, annaga shakhsi ahaan nalama ilaalin Yehowah? Ilaalinta Yehowah ina siinayo waa tan mustaqbalkeenna weligeed ah, xagga rajada nolosha weligeed ah, haddii aan u adkaysano illaa dhammaadka (Matayos 24:13; Yooxanaa 5:28,29; Falimaha Rasuullada 24:15; Muujintii 7:9-17). Intaa waxaa dheer, Ciise Masiix sharraxaaddiisa calaamadda maalmaha ugu dambeeya (Matayos 24, 25, Mark 13 iyo Luukos 21), iyo kitaabka Muujintii (gaar ahaan cutubyada 6:1-8 iyo 12:12), waxay muujinayaan in bini'aadamnimadu waxay la kulmi doontaa nasiib darro weyn tan iyo 1914, taas oo kuu oggolaaneysa in la fahmo, in muddo ah, Ilaah ma difaaci doono aadanaha. Si kastaba ha noqotee, Ilaah wuxuu noo suuro geliyey inaan nafteenna ku ilaashanno adoo adeegsanaya hanuunkiisa wanaagsan ee ku jira Kitaabka Quduuska ah, Eraygiisa. Marka si guud loo hadlo, ku-dhaqanka mabaadi'da Baybalka waxay ka caawineysaa in laga fogaado khataraha aan loo baahnayn ee nolosheena si aan macquul ahayn u gaabin kara (Maahmaahyadii 3:1,2). Waxaan kor ku aragnay inaysan jirin wax la yiraahdo qaddar. Sidaa darteed, adeegsiga mabaadi'da Kitaabka Quduuska ah, hanuuninta Eebbe, waxay la mid noqon doontaa sidii si taxaddar leh loo fiiriyo midig iyo bidix ka hor intaanad ka tallaabin waddada, si loo badbaadiyo nolosheena (Maahmaahyadii 27:12).
Intaa waxaa dheer, rasuul Butros wuxuu ku adkeystay baahida loo qabo tukashada: "Haddaba wax walba dhammaadkoodu wuu dhow yahay, sidaas daraaddeed digtoonaada, oo tukashada u feeyignaada" (1 Butros 4: 7). Salaadda iyo fekerku waxay ilaalin karaan isku dheelitirka ruuxiga ah iyo maskaxdeena (Filibiyaan 4:6,7; Bilowgii 24:63). Qaarkood waxay aaminsan yihiin inuu ilaahay ilaaliyay mar uun noloshooda. Ma jiro wax ku jira Kitaabka Qudduuska ah oo ka hortagaya suurtagalnimadaas gaarka ah in la arko, waa iska soo horjeed: "Oo waan u roonaan kii aan doonayo inaan u roonaado, waanan u naxariisan kii aan doonayo inaan u naxariisto" ( Baxniintii 33:19). Waxay u dhexeysaa Ilaah iyo qofkan la ilaalin lahaa. Waa inaannaan xukumin: "Yaad tahay kaaga xukuma midiidinka mid kaleto? Waayo, sayidkiisuu u taagan yahay ama u dhacaa. Waana la taagi doonaa, waayo, Rabbigu waa awoodaa inuu taago" (Rooma 14:4).
Walaaltinimo oo is caawi
Kahor dhamaadka silica, waa inaan is jeclaano oo aan is caawino, si aan u yarayno dhibaatada nagu hareeraysan: "Waxaan idin siinayaa qaynuun cusub oo ah, Waa inaad isjeclaataan; sidaan idiin jeclaaday, idinkuna waa inaad isu jeclaataan. Sidaasay dadka oo dhammi idinku garan doonaan inaad xertaydii tihiin, haddaad jacayl isu qabtaan” (Yooxanaa 13:34,35). Xerta Yacquub, wuxuu si fiican u qoray in jacaylka noocan ah ay tahay in lagu muujiyo ficillo si loo caawiyo deriskeenna dhibaatada ku jira (Yacquub 2: 15,16). Ciise Masiix wuxuu yiri waa inaan caawino kuwa aan waligood lacag ka bixin karin (Luukos 14:13,14). Marka sidaas la samaynayo, hab, ayaan "amaahinnaa" Yehowah wuuna inagu siin doonaa... boqol laab (Maahmaahyadii 19:17).
Waa wax xiiso leh in la akhriyo waxa Ciise Masiix ku sifeeyay ficillo naxariis ah oo awood noo siin doona inaan helno nolosha weligeed ah: "Waayo, waan gaajooday oo cuntaad i siiseen, waan harraadsanaa oo waad i waraabiseen, qariib baan ahaa oo waad i soo dhoweeyseen, waan qaawanaa oo dhar baad i huwiseen, waan bukay oo waad i soo booqateen, xabsi baan ku jiray oo waad ii timaadeen" (Matayos 25:31-46). Waa in la ogaadaa in dhammaan ficilladan oo dhan uusan jirin fal loo qaadan karo "diin". Sababta Badanaa, Ciise Masiix wuxuu ku celiyey taladan: "Waxaan doonayaa naxariis ee ma aha allabari" (Matayos 9:13; 12:7). Micnaha guud ee erayga "naxariis" waa naxariis ficil ahaan (Micnaha cidhiidhiga ahi waa cafis). Markaan aragno qof baahan, iyo haddii aan awoodno inaan sidaas yeelno, waan caawin doonnaa (Maahmaahyadii 3:27,28).
Allabarigu wuxuu u taagan yahay falal ruuxi ah oo si toos ah ula xiriira cibaadada Ilaah. Markaa sida iska cad xiriirka aan la leenahay Ilaahay ayaa ugu muhiimsan. Si kastaba ha noqotee, Ciise Masiix ayaa dadka qaar cambaareeyay kuwaas oo marmarsiinyo u isticmaalay "allabaryo" in aan la caawin waalidkood oo duqoobay (Matayos 15:3-9). Waa wax xiiso leh in la ogaado waxa Ciise Masiix ka yidhi kuwa aan yeeli doonin doonista Ilaah: "Maalintaas qaar badan baa igu odhan doona, Rabbow, Rabbow, miyaannan magacaaga wax ku sii sheegin, oo miyaannan magacaaga jinniyo ku saarin, oo miyaannan magacaaga wax badan oo xoog leh ku samayn?" (Matayos 7:22). Haddii aan isbarbar dhigno Matayos 7:21-23 iyo 25:31-46 iyo Yooxanaa 13:34,35, waxaan ogaanay in "allabaryo" iyo naxariis, ay yihiin laba cunsur oo aad u muhiim ah (1 Yooxanaa 3:17,18; Matayos 5:7).
Yehowah wuu caafi doonaa aadanaha
Su'aasha nebi Xabaquuq (1:2-4), ee ku saabsan sababta uu Eebbe u oggolaaday silica iyo xumaanta, waa tan jawaabta: "Oo Yehowah wuu ii jawaabay, oo wuxuu igu yidhi, Waxa lagu tusay qor, oo looxyo ku caddee, si kii akhristaaba u ordo. Waayo, wixii lagu tusay waa weli, oo waxay iman doonaan wakhtigii la yidhi, wayna u degdegaan ugudambaysta, oo innaba been ma sheegi doonaan. In kastoo ay raagaan waa inaad sugtaa, maxaa yeelay, sida xaqiiqada ah way noqon doonaan, oo innaba ma raagi doonaan" (Xabaquuq 2:2,3). Waa kuwan qaar ka mid ah qoraallada Baybalka ee mustaqbalkan dhow "aragtida" rajada ee aan daahin doonin:
"Oo waxaan arkay samo cusub iyo dhul cusub; waayo, samadii hore iyo dhulkii hore way dhammaadeen; oo baddiina mar dambe ma ay jirin. Oo haddana waxaan arkay magaalada quduuska ah, taasoo ah Yeruusaalem cusub oo samada ka soo degaysa xagga Ilaah, iyadoo loo diyaariyey sidii aroosad ninkeedii loo sharraxay. Markaasaan maqlay cod weyn oo carshiga ka yeedhaya oo leh, Bal eeg, rugta Ilaah waxay la jirtaa dadka, oo isna wuxuu la degganaan doonaa iyaga, oo iyana waxay ahaan doonaan dadkiisa, oo Ilaah qudhiisuna wuxuu la jiri doonaa iyaga, oo wuxuu ahaan doonaa Ilaahood; oo isna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona, waayo, waxyaalihii hore way dhammaadeen. Markaasaa kii carshiga ku fadhiyey wuxuu yidhi, Bal eeg, wax kastaba cusayb baan ka dhigayaa. Oo wuxuu igu yidhi, Qor, waayo, erayadanu waa aamin iyo run" (Muujintii 21:1-4).
"Oo yeydu waxay la joogi doontaa baraarka, shabeelkuna wuxuu la jiifsan doonaa waxarta, oo weysha iyo dhasha libaaxa iyo neefka buuranu way wada joogi doonaan, oo waxaa iyaga hor kici doona ilma yar. Oo waxaa wada daaqi doona saca iyo orsada, oo ubadkooduna way isla wada jiifsan doonaan, oo libaaxuna sida dibiga oo kale caws buu u cuni doonaa. Oo caanonuuggu wuxuu ku dul cayaari doonaa godka jilbiska, ilmaha naaska laga gudhiyeyna wuxuu gacantiisa saari doonaa hogga abeesada. Oo buurtayda quduuska ah oo dhan, waxba kuma yeeli doonaan, waxna kuma baabbi'in doonaan, waayo, dhulka waxaa ka buuxsami doona aqoonta Yehowah, siday biyuhu badda uga buuxaan" (Ishacyaah 11:6-9).
"Oo markaasaa kuwa indhaha la' indhahoodu furmi doonaan, oo kuwa dhegaha la' dhegahooda furka laga bixin doonaa. Oo markaasaa ninkii curyaan ahu wuxuu u boodboodi doonaa sida deerada oo kale, oo kii carrab la' carrabkiisuna wuu gabyi doonaa, waayo, cidlada biyaa ka soo burqan doona, oo lamadegaankana durdurraa ka soo bixi doona. Oo dhulkii engegay wuxuu noqon doonaa balli, oo dalkii oommanaha ahaana wuxuu noqon doonaa ilo biyo ah, oo rugtii dawacooyinku jiifsan jireenna waxaa ka soo bixi doona caws iyo gobays iyo dareemo" (Ishacyaah 35:5-7).
"Oo markaas dabadeedna innaba dhexdeeda ilmo dhawr maalmood jira, amase oday aan cimrigiisa dhammaysan lagama heli doono, waayo, ilmuhu wuxuu dhiman doonaa isagoo boqol sannadood jira, dembilaha boqol sannadood jirase wuxuu ahaan doonaa mid inkaaran. Guryay dhisan doonaan, wayna degi doonaan, oo beero canab ahna way beeran doonaan, midhahoodana way cuni doonaan. Si uu mid kale u dego, guryo ma ay dhisi doonaan, oo si uu mid kale u cuno, beero ma ay beeran doonaan, waayo, dadkayga cimrigiisu wuxuu ahaan doonaa sidii geed cimrigiis, oo kuwayga aan doortayna wakhti dheer ayay shuqulka gacmahooda ku farxi doonaan. Si aan waxba tarin uma ay hawshoon doonaan, oo masiibona carruur uma ay dhali doonaan, waayo, iyagu waa farcankii kuwii Rabbigu barakeeyey, iyaga iyo carruurtoodaba. Intaanay dhawaaqin ayaan u jawaabi doonaa, oo intay weli hadlayaan ayaan maqli doonaa" (Ishacyaah 65:20-24).
"Hilibkiisu waa ka sii jilicsanaan doonaa kan ilmaha; Oo wuxuu ku noqdaa wakhtigii dhallinyaranimadiisa" (Ayuub 33:25).
"Oo Yehowah ciidammadu wuxuu dadyowga oo dhan buurtan ugu samayn doonaa diyaafad ah baruur miidhan, iyo khamri raagay, iyo waxyaalo baruur badan oo dhuux ka buuxo, iyo khamri raagay oo aad loo miiray. Oo isagu wuxuu buurtan ku baabbi'in doonaa daboolka dadyowga oo dhan la dul saaray iyo indhashareerta quruumaha oo dhan lagu dul fidiyey. Oo dhimashadana weligeed buu liqay, Sayidka Rabbiga ahuna weji kastaba ilmada wuu ka tirtiri doonaa, oo ceebta dadkiisana dhulka oo dhan wuu ka qaadi doonaa, waayo, sidaasuu Yehowah ku hadlay" (Ishacyaah 25:6-8).
"Kuwaagii dhintay way soo noolaan doonaan, meydadkuna way soo sara kici doonaan. Kuwiinna ciidda ku dhex jirow, soo toosa oo gabya! Rabbiyow, dharabkaagu waa sida dharabka geedaha nooleeya, oo dhulkuna meydadkuu soo xoori doonaa" (Ishacyaah 26:19).
"Oo qaar badan oo ku hurda ciidda dhulka ayaa soo toosi doona, qaarkood waxay u soo toosi doonaan nolol weligeed ah, qaarkoodna waxay u soo toosi doonaan ceeb iyo quudhsasho weligeed ah" (Daanyeel 12:2).
"Taas ha la yaabina, waayo, saacaddu waa imanaysaa markii kuwa xabaalaha ku jiraa dhammaantood ay codkiisa maqli doonaan, wayna ka soo bixi doonaan, kuwa wanaagga falay ilaa sarakicidda nolosha, kuwa sharka falayna ilaa sarakicidda xukunka" (Yooxanaa 5:28,29).
"Oo waxaan xagga Ilaah ka rajaynayaa waxyaalaha ay kuwan qudhooduba filanayaan, waana inay jiri doonto sarakicidda ay kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn soo sara kici doonaan" (Falimaha Rasuullada 24:15).
Waa kuma Shaydaan Ibliis?
Ciise Masiix wuxuu si fudud u sharraxay Ibliiska: “Tan iyo bilowgii wuxuu ahaa mid dhiig qaba, runtana kuma uu joogsan, waayo, runtu kuma jirto isaga. Markuu been ku hadlo, tiisuu ku hadlaa, waayo, waa beenaaleh, waana beenta aabbaheed” (Yooxanaa 8:44). Shaydaanka Ibliisku waa nafley run ah (Matayos 4:1-11). Sidoo kale, jinniyadu sidoo kale waa malaa'igo caasiyiin noqday oo raacay tusaalaha Shaydaanka (Bilowgii 6:1-3, si loo barbardhigo xarafka Yahuuda aayada 6: "oo malaa'igihii aan dhawrin madaxtinimadoodii, laakiinse rugtoodii ka tegey, wuxuu ilaa xukunka maalinta weyn ku hayaa silsilado weligood ah iyagoo gudcur ku hoos jira").
Ilaah malaa'igtan ku abuuray malaa'igtaan dembi la'aan iyo qalbi xumaan la'aan. Malaggan, bilowgii noloshiisa wuxuu lahaa "magac qurxoon" (Wacdiyahii 7:1a). Si kastaba ha noqotee, muu sii ahaanin mid aamin ah, wuxuu ku beeray kibir qalbigiisa wuxuuna mudo kadib noqday "sheydaan", oo micnaheedu yahay aflagaado iyo mucaarad; magaciisii ​​hore ee quruxda badneyd, sumcaddiisii ​​wanaagsaneyd, waxaa beddelay mid kale oo macnaheedu yahay ceeb weligeed ah. Wax sii sheegidda Yexesqeel (cutubka 28aad), ee ku saabsan boqorka kibirka leh ee Turos, waxaa si cad loogu tilmaamayaa islaweynaanta malaa'igtii noqotay "Shaydaan": "Wiilka Aadamow, boqorka Turos baroor u qaad, oo waxaad isaga ku tidhaahdaa, Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, Adigu waxaad ahayd dhammaystirkii kaamilnimada, oo waxaa kaa buuxday xigmad, quruxdaaduna kaamil bay ahayd. Waxaad joogi jirtay Ceeden oo ahayd beertii Ilaah, oo waxaad huwatay dhagax kasta oo qaali ah, kuwaasoo ahaa sardiyos, iyo tobasiyos, iyo dheemman, iyo berullos, iyo onika, iyo yasbid, iyo safayr, iyo sumurud, iyo mid birqaya, oo dafafkaaga iyo biibiilayaashaada shuqulkoodu wuu kula jiray. Maalintii lagu abuuray waa laguu diyaariyey. Waxaad ahayd keruubkii subkanaa ee wax dabooli jiray, oo aniga ayaa saas kaa dhigay si aad buurta quduuska ah ee Ilaah u joogtid. Oo waxaad hor iyo dib ugu dhex socon jirtay dhagaxyo dab ah. Maalintii lagu abuuray iyo ilaa markii xaqdarro lagaa helay jidadkaagaad kaamil ku ahayd" (Ezekiel 28:12-15). Ficilkiisii ​​cadaalad darrada ee Ceeden, wuxuu noqday "beenaale" oo sababay dhimashada dhammaan farcankii Aadam (Bilowgii 3; Rooma 5:12). Xilligan, waa Shayddaanka adduunka xukuma: "Imminka weeye markii dunidan la xukumi lahaa, imminka kan madaxda dunida ah dibaddaa lagu tuuri doonaa" (Yooxanaa 12:31; Efesos 2:2; 1 Yooxanaa 5:19).
Shaydaanka si rasmi ah ayaa loo baabi'in doonaa: "Oo Ilaaha nabaddu Shayddaan buu haddiiba cagihiinna hoostooda ku burburin doonaa" (Bilowgii 3:15; Rooma 16:20).